Iningi ukutheleleka streptococcal kubangela hemolytic streptococcus. Yena nezingane kakhulu ekuthonyweni nasebekhulile. Ezindaweni nge sezulu ngokucijile-yezwekazi futhi athokomele, leli qembu izifo ezibangelwa amagciwane ingenye ezivame kakhulu. Kuvamise kwesizini nemvelo futhi sithinta ulwelwesi lwamafinyila we nasopharynx futhi amalaka.
Ngokuvamile yenziwe yaba yasendaweni ukutheleleka streptococcal emphinjeni. Lokhu ukuvuvukala sitholakale njengoba pharyngitis noma namathansela. Phakathi kwalezi zifo umehluko okukhulu. Ukuze ukwelashwa ukuze sibe abafundisi abaphumelela ngempela, kufanele aqondwe kulokho ukuvuvukala, okuyinto izitho kuthinteka futhi ukuthi udinga ukubona udokotela. Izifo "strep emphinjeni" - yisishiso mucosa we nasopharynx, keminye kuvame ayiphazamiseki. Lapho streptococcal namathansela ukuvuvukala kwenzeka amalaka. Naphezu kweqiniso lokuthi lezi zifo kuvamile ezinganeni, abadala futhi singangena ke.
Umthombo izifo streptococcal abantu abagulela ukufa, okungenani - bacillicarriers, okungukuthi, labo abanazo izimpawu ebonakalayo lesi sifo. Ukudluliswa kwe-pathogen kwenzeka futhi contact-yasendlini amaconsi sisemoyeni. Ukuze lwegciwane Streptococcus ukungena emzimbeni, asikho isidingo ukubandakanya isiguli ukuthintana ngqo. Ingane angaba ngokusebenzisa nelineni, amathoyizi esithambile noma izinto. Nge awokuthi yinhlanganisela izingane thatha ukutheleleka luyanda izikhathi eziningana. Eqoshiwe nokuqubuka enkulu namathansela ezinganeni ukuya izinkulisa kanye nezikole.
Izimpawu izifo streptococcal kungenzeka ube ukuhluka ngekuya yobudala isiguli. Izingane kuze kube unyaka Kwabiwa akhathalela ngokuyinhloko of acinene oluhlaza noma ophuzi. Kuyaqapheleka futhi imfiva, ukungakuthandi ukudla ukucasuka. Izingane kuze kube iminyaka emithathu esekhala nomphimbo obuhlungu, bona beye bancipha ithoni, izinga lokushisa lenyuka, kukhuphuke lymph node perednesheynye. Izimpawu izifo streptococcal e izingane ezindala avele ngokucace kakhudlwana. imfiva, ubuthakathaka, ukukhathala, ezinzima umphimbo obuhlungu, nobunzima ukugwinya, ikhanda elibuhlungu, ubovu koqweqwe amalaka.
Abazali kufanele wazise izimpawu ezifana izinhlungu zekhanda ezinamandla, kubuhlungu kakhulu, futhi ukugwinya ngisho nangemva isiphuzo efudumele. Ngokuvamile ngalesi simo sihambisana imfiva, ubuthakathaka, ubuhlungu esiswini nokuhlanza. Uma ingane uvele ukuqubuka anolaka obomvu, kumelwe ngokushesha shayela "ambulensi." Lokhu uphawu kuyisici sobuntu ekuthuthukiseni scarlet fever. Ngenxa yalesi ukutheleleka libhekene inhlanganisela igciwane streptococcal. Futhi, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngokushesha uma imakwe iphika, futhi ingane iba nzima ukugwinya ngisho ngamathe. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla esibhedlela ukutheleleka streptococcal oyokwenziwa laqokwa ukwelashwa okuphumelelayo.
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa oluhambisana cystitis
Population Macedonia: izici, ubungako kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Pancake nge cherry - dessert elula kodwa esihlwabusayo kakhulu
I emangalisayo Ichalkovsky emhumeni?
Ukulungisa nezinkophe sawo makeup
Statesman Gref German Oskarovich: Biography, impumelelo, umndeni, amaqiniso athakazelisayo
Izakhiwo awusizo, Izimo, umonakalo kanye ikhalori itheniphu
Siya eholidini: imithetho yokuthutha izilwane esitimeleni
Mitral umphini prolapse (MVP) 1 degree
Iyini indaba futhi lihluke kanjani kwezinye izinhlobo?
Isakhiwo Architectural: a samuntu sothando, inkolo kanye iphakade